Ahoana ny fomba hahitanao haingana ny vokatra hita amin'ny Amazon?
Tsy misy mpitaingina fa ny mpividy nahomby dia tokony hijanona foana eo amin'ny firoborobon'ny varotra amin'izao fotoana izao ary hahafantatra tsara ny vokatra hita indrindra amin'ny Amazon. Nahoana no tena zava-dehibe tokoa io fahalalana io ho an'ny mpandraharaha maoderina maoderina an-tserasera? Satria tsy ny fivarotana tranonkala ihany, fa ny fivarotam-bary sy tsena fandevenana tany am-boalohany - dia natao rehetra mba hanomezana olona ireo vokatra izay tadiavin'ny olona. Midika izany fa ny vokatra azo entina am-piadanana ary ny vokatra aterak'andro dia ny hany fomba tokana ahafahana mampivelatra ireo mpividy indrindra ho an'ny mpivarotra. Noho izany, tsy mahagaga raha raha manao izay tsara indrindra vitanao ianao mba hahatonga ny lisitry ny lisitra hozakaina miaraka amin'ireo vokatra hita indrindra ao amin'ny Amazon - ianao dia nahazo ity hevitra mazava ity fa efa mihetsika eo amin'ny làlana marina. Ho an'ireo izay mbola tsy mahatsiaro tena amin'ny tadidy havanana dia mila mitady mpitsidika ambony indrindra amin'ny Amazon na tolotra mivelatra azo avy amin'ny varotra azo tsapain-tanana vao mahazo ny laza - amin'izao fotoana izao dia tari-dalana fohy ho anao hanampy amin'izany.
Mijery ny Google Trends
Ny fomba tsotra indrindra amin'ny fanaraha-maso ny vokatra notadiavina indrindra
Ny fanolorana azy ireo amin'ny lisitry ny vokatra Amazon ao amin'ny vokatrao dia mameno fotsiny ny singa mety mampanantena anao - mivantana ao amin'ny Google Trees fikarohana - buy georgian passport. Tsy ilaina ny milaza fa io fitaovana am-pitoeran-daza io dia azo jerena amin'ny aterineto. Andramo ity fomba fanao marina sy tena marina ara-tsiansa ity mba hanamarinana haingana raha toa ka misy ny vokatra manokana amin'ny fitomboan'ny mpanjifa, na tsy misy na inona na inona. Ny zava-drehetra momba ny fironana Google dia fanazavana tena. Midika izany fa ny vokatra hita rehetra, anisan'izany ireo any Amazona, dia azo heverina ho azo antenaina ho hita ao anaty vohikala fikarohana sy toerana any amin'ny Google Trends.
Mitadiava ireo vokatra malaza any an-tranonkala
Ambonin'i Amazonia, mety hitanao ihany koa ny toerana misy tsena an-tserasera hafa izay malaza amin'ny mpividy ecommerce mafonja mba hahafahanao mahazo sary lehibe momba ny fampiroboroboana ara-barotra manontolo - mitsidika na dia ny sehatra elektronika tokana monja aza. Midika izany fa azonao takarina mora foana ny vokatra azo atao na dia efa be mpividy aza, na mety hampanantena fa ho tonga haingana indrindra. Mando fotsiny ny fitsidihana miverimberina amin'ny fizarana vokarin'ny Amazon amin'ny mpivarotra tsara indrindra, jereo ny fivarotana ambony amin'ny eBay, ary koa ny fifanarahana tsara indrindra amin'ny alibaba online store.
Mitadiava mpanentana amin'ny fitaovana fitiliana JungleScout
Ary ankehitriny dia izao no fotoana ahafahan'i JungleScout Amazon fitaovana hilalao an-tsehatra. Ahoana raha toa ka hadinonao izany rehetra izany indray andro sy ho an'ny rehetra? Mitadiava fanampiana amin'ny mpanampy amin'ny aterineto matihanina manokana mba hanarahana ny fivoaran'ny fivarotana sy ny vidin'ny vidiny rehetra, mba hiatrehana ny fomba ahazoana vokatra avy any ivelany, ary koa mahasoa ny mahita ny vokatra hita indrindra amin'ny Amazon. Ankoatr'izay, amin'ny fampiasana ny JungleScout, tsy afaka mahita ny vokatra malaza izay ilainao ianao, fa hahazo fanadihadiana mavesa-danja lalina mba hanatsarana ny lisitry ny vokatrao miaraka amin'ireo teny fanalahidy marina sy ireo andian-teny lava fohy - ary mahita anao eo anivon'ireo mpitarika mivantana amin'ny tena feno tsena iraisam-pirenena.